विचार – Hamropati.com
By on February 10, 2018 विचार
लन्डन (एजेन्सी) वैज्ञानिकहरू अहिले त्यसतो जीवको अनुसन्धानमा लागेका छन्, जसको प्राय सबै अंग नस्ट भएपछि पनि पुन पलाउने गर्छ। मेक्सिकन एक्सोलटर नामक उक्त जीव मेक्सिकोको तालहरूमा पाइने गरेको छ। यो जीव पानी बाहेक जमिनमा पनि रहन सक्छ। माउसुली जस्तो देखिने यो जीव आफ्नो अंग नस्ट भएपछि पनि पुन पलाउन सक्ने असाधारण क्षमताका लागि चिनिएको छ। […]
अच्चम्मको चलन: जहाँ श्रीमतीसँग सेक्स गराएर पाहुनाको स्वागत !
By on January 20, 2018 विचार
एजेन्सी । संसारमा विचित्र विचित्र खालका संस्कारहरु छन् । भारतमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ आफ्नै श्रीमतीसँग सेक्स गराएर मात्रै पाहुनाको औपचारिक रुपमा स्वागत गर्ने गरिन्छ । यो प्रचलन भारतका विभिन्न गाउँमा अझै पनि कायमै छ । भारत सरकारले यो प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर पनि परम्परागत समाजमा यो प्रथा अझै कायमै छ । […]
के राजतन्त्र फर्काउने तयारी हुँदै छ?
By on January 18, 2018 विचार, समाज
काठमाडौ। नेपाल र भारतका विभिन्न धार्मिक स्थलको भ्रमणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यस्त छन् । गद्धी छाडेको १ दशकपछि पनि नेपालमा राजसंस्था फर्कने आशा भने उनले मारिसकेका छैनन् । पछिल्लो समय छोरा पारस शाहका कारण तनावमा रहेका ज्ञानेन्द्रले सके आफू नसके हृदयेन्द्रलाई भएपनि गद्धीमा बसाएर राजतन्त्र फर्काउन सबै खाले प्रयास गर्ने बताएका छन् । भारतीय […]
कांग्रेस पराजित हुनुको मुख्य कारण नै दुई वाम दलको भोट
By on December 13, 2017 प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार
काठमाडौं, मंसिर २७। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम व्यहोरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसका कारणबारेमा चर्चा हुन थालेको छ । यही मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न दुवै चरणका निर्वाचनमा काँग्रेसले प्राप्त गरेको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सायदै कसैले अनुमान गरेको थियो होला । काँग्रेस नेताहरू पार्टी हारका पछाडि मुख्यरुपमा दुई ठूला […]
जनमानसको बुझाई ‘चुनावपछि घोषणापत्रै बिर्सन्छन् नेता’
By on December 1, 2017 प्रमुख समाचार, मध्यमाञ्चल, राजनीति, विचार, समाज
काठमाडौं, मंसिर १५ । काठमाडौंको जैशीदेवलका सुरेन्द्रकुमार क्षेत्रीलाई चुनावका बेला नेताले बाँड्ने ठुल्ठूला आश्वासनको मतलब छैन । उनलाई आफ्नो टोलको जैशीदेवल मन्दिर चाँडै पुनर्निर्माण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता छ । अरू आश्वासन बाँड्नुको साटो साढे दुई वर्षअघिको भूकम्पले भत्काएको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नेलाई भोट दिने सुरुमा छन् उनी। ‘नेताले फेरि यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्दा पनि […]
असन्तुष्टि राखेर महिनौंसम्म आन्दोलन भएको क्षेत्रमा ७७ मत खस्यो
By on September 20, 2017 राजनीति, विचार, समाज
लहान, असोज ४ । प्रदेश २ मा सोमबार सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा ७७ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले मतदान उत्साहपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । तीनतीनपटक सरेर भएको चुनावमा मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक रहेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। ब्याटल फिल्ड ९आन्दोलन भूमि० मा कसरी यति धेरै मत खस्यो रु यो […]
By on April 20, 2017 प्रमुख समाचार, विचार
महाभूकम्प गएकाे याे वैशाख महिनाले ठ्याक्कै २ वर्ष पुग्याे। २०७२ सालकाे यहि वैशाखकाे १२ गते महाभुकम्प गएकाे थियाे। १४ वटा जिल्ला त ध्वस्तै भएकाे थियाे। हजाराै मान्छेहरु मरे,हजाराै बेपत्ता,हजाराै घाईते, अपाङ्ग, हजाराै घरवारविहिन, टुहुरा भए। मर्ने त मरेर गए, बाँच्नेको जिन्दगि कष्टकर बन्न पुग्यो ! राष्ट्रका सपूत अशल इमान्दार जतिलाइ छानी छानी […]
By on December 1, 2016 विचार
सन्तकुमार चौधरी यो पटक युएई भ्रमणपछि काठमाण्डौं स्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दा मन खिन्न भयो । विमानस्थ्ल व्यवस्थापनलाई मनमनै निकै गालि गरें । युएई भ्रमण पछि म नेपाल फर्कीदै थिए । विमानस्थ्लमा देखिएको देख्दा सामान्य लाग्ने तर ठूलो विषयले मेरा आँखाहरु रसाए र सामान्य भाषामा सर्वसाधरणले बुझ्ने गरि लेख्न बसें । युएई भ्रमणको […]
By on November 23, 2016 विचार
शुसिल पौडेल केहि दिन यता नेपालको रास्टृय दैनिक पत्रीका र अनलाईनहरु लघुबित्तलाई सगिन आरोप लगाउदै आलोचनामा उत्रेको पाइयो । ति लेखहरु हेर्दा, पक्कै ति लेखहरु धनी शहरीयाहरु मार्फत निर्देसित छ भन्ने पनि लाग्छ । तर यो पङ्तिकार ति शहरीयाहरुको बिरुद्दमा कलम चलाईरहेको छैन मात्र ग्रामिण क्षेत्रमा लघुबित्त को प्रभाब को बारेमा लेख्न खोजिरहेको छ । […]
By on August 26, 2016 विचार
सन्ताेषी साह नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमानसँगै शहरदेखि गाउँ मेचिदेखि कालीसम्मका कुना काप्चा र दूर दराजका स-सना छलफल, भेलादेखि लिएर सम्मेलन, गोष्ठि, आमसभामा सुन्न पाइने टट्कारो विषय महिला शहभागिता र तिनको सशक्तिकरण हो। परापूर्व कालदेखि बिभिन्न वाहानामा महिला विरुद्ध शोषण, विभेद र उत्पिडन संसार भर हावी त छँदैछ त्यसमा पनि दक्षिण एसिया अझ भनौं नेपालका घटना […]